Mandefa rakitra be dia be: inona no fitaovana maimaim-poana? | Famoronana an-tserasera
Alao an-tsaina ny toe-javatra. Vao nahavita tetikasa ho an'ny mpanjifa ianao. Tsy maintsy mandefa mailaka aminy ianao miaraka amin'ireo singa rehetra niasanao sy ny kalitao tsara indrindra. Ka hanokatra ny mailakao ianao izao handefasana azy any, ary sa tsy izany? Aza manahy fa mahazatra kokoa noho ny fieritreretanao azy io. Ny fandefasana rakitra be dia be amin'ny alàlan'ny fantsona mahazatra dia tsy azo atao, saingy soa ihany fa misy fitaovana hafa afaka manampy anao hahazo izay tianao amin'ny mpandray anao.
Manaraka izany dia hiresaka aminao izahay ny fomba fandefasana rakitra lehibe, inona avy ireo fitaovana azonao ampiasaina, maimaim-poana, hanaovana azy, ary ny fomba fanaovana azy na dia amin'ny alàlan'ny findainao aza. Andao hatao?
1 Mandefasa rakitra lehibe, maninona raha amin'ny alàlan'ny mailaka?
Mandefasa rakitra lehibe, maninona raha amin'ny alàlan'ny mailaka?
Ny zavatra mahazatra, rehefa te handefa rakitra ianao, dia mety ho pdf, sary sns. dia ny fampiasana mailaka. Saingy ireo dia manana fetra amin'ny haben'ny fonosana, ary na dia mamela anao hampiasa fitahirizana rahona aza izy ireo indraindray dia tsy dia ampy loatra amin'izay tianao halefa. Noho io antony io dia fitaovana maro no nivoaka izay manampy amin'ny fandefasana rakitra be nefa tsy mampiasa mail, ny maro amin'izy ireo dia manome rohy tsotra fotsiny anao handefasana azy, na amin'ny alàlan'ny mailaka, WhatsApp, Telegram ...
fa, Inona avy ireo fitaovana tsara indrindra any? Lazainay aminao.
Tsy misy isalasalana, WeTransfer dia fitaovana fantatra manerantany. Io dia ahafahanao mandefa hatramin'ny 2GB sy 10 mpandray samihafa indray mandeha, izay be dia be. Ny hany zavatra mametra anao dia ny haben'ny zavatra andefasanao; izany hoe afaka mampiditra ireo rakitra rehetra tadiavinao ianao, saingy amin'ny ankapobeny dia tsy tokony hihoatra ny 2GB ny habeny.
Amin'ny fotoana fandefasana azy dia manome safidy roa ianao: ny fitaovana mihitsy no miandraikitra ny fandefasana mailaka amin'ilay olona tokony handray azy miaraka amin'ny rohy hampidina azy; na manome anao ny rohy fampidinana mba hahafahanao maka tahaka azy ary mandefa azy amin'ny alàlan'ny fantsona tadiavinao.
Ny zavatra tsara momba ilay fitaovana dia izany Tsy ilaina ny misoratra anarana, ary tsy mametra ny fandefasana (Ohatra, iray ihany ny fandefasana isaky ny ora x na andro), fa ny zavatra ratsy dia ny fetra 2GB, na dia azo omena miaraka amin'ny kinova aza izany, izay ahafahanao mandefa hatramin'ny 20 GB ary manana tahiry 1TB misy koa ianao .
Betsaka izany tsy dia fantatry ny rehetra, fa mbola mahay tsara amin'ny zavatra ataony. Ho an'ny vao manomboka, mamela anao handefa rakitra be tsy misy fetra. Ankehitriny, mba hanaovana izany dia manana fomba roa ianao. Raha latsaky ny 10GB izany dia ny zavatra ataonao dia tahirizo ao anaty rahona, ka azon'ny rehetra alaina. Fa raha lehibe kokoa noho ireo 10GB ireo dia zaraina ho rafitra P2P. Izany hoe, toy ny nisintona torrent ianao.
Ny hany zavatra ratsy hitantsika ato amin'ity rafitra ity, ary mety ho izany no antony tsy tianao hampiasa azy io, dia ny tsy maintsy hametrahanao rindranasa amin'ny solosainao, zavatra izay tian'ny maro hisorohana amin'ny vidiny rehetra. Fa raha tsy mampaninona anao izany dia azo antoka fa afaka mampiasa azy io tsy misy olana ianao.
Ity fitaovana ity dia iray hafa fantatra kokoa momba ny fandefasana rakitra lehibe. Ny zavatra tsara momba azy dia ny ahafahanao mandefa rakitra, tsy misy fetrany habe, ho an'ny mpandray tokana. Ary ho hita mandritra ny 3 andro fotsiny izy io. Ankehitriny, manana teboka ratsy izy ary izany dia, na eo aza Maimaimpoana izy io, manana ny olana tokony hosoratanao hampiasa azy io.
Fantatrao ve fa ny browser Mozilla Firefox dia afaka mandefa rakitra be dia be. Aza matahotra, na isika koa. Izany no antony anoloranay izany. Ity fitaovana ity dia ahafahanao mandefa rakitra hatramin'ny 1GB raha tsy misoratra anarana ianao, hatramin'ny 2,5GB raha manao izany, miaraka amina rohy izay dia ho tapitra amin'ny fotoana x (mba fantatrao fa tsy ho eo amin'ny rahona foana ny rakitrao).
Ny hany zavatra ratsy amin'ity tranga ity dia ny fetrany, satria raha lehibe kokoa ilay rakitra handefasana dia mila mampiasa hafa ianao.
Ary miresaka momba ny fitaovana isan'andro, saika ny olona rehetra dia efa manana mailaka miaraka amin'i Google ao amin'ny Gmail. Ary ity dia mamela anao hitahiry tahiry 15GB Google Drive. Azonao atao ny mandefa rakitra be dia be amin'izay tianao amin'ny fetran'ny habakabaka.
Raha ny mampiditra rakitra be dia be fa tsy mila mandoa na inona na inona hanaovana azy, ahoana ny fanandramana ity fitaovana ity? Mamela anao hametaka rakitra hatramin'ny 5GB miaraka amin'ny kinova maimaimpoana. Na izany aza, azonao atao ihany koa ny mahatratra 100GB amin'ilay karama.
Ho fanampin'izany, manome anao 1TB fitehirizana rahona maharitra izy.
Talohan'ny nahafantarana ny WeTransfer sy nampiasaina eran'izao tontolo izao dia ny MediaFire no voafidy taloha. Fitaovana manome anao izy io fitehirizana rahona hatramin'ny 10GB, ary afaka! Ho fanampin'izany, ny rakitra dia azo zaraina amin'ny alàlan'ny mailaka, rohy, na koa media sosialy.
Tsy lakolosy ve? Raiso moramora fa ara-dalàna. Saingy tianay hambara aminao ny momba izany satria fitaovana novolavolaina tany Espana izy io. Mamela anao handidy fisie hatramin'ny 50, ary hatramin'ny 5GB ny habeny, olona 20 farafahakeliny isaky ny mandeha amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka (na manome anao rohy hahafahanao mandefa izany amin'izay tianao).
Ny zavatra tsara dia tsy mila misoratra anarana ianao, ary ny antontan-taratasy alefanao dia ho hita mandritra ny 7 andro fotsiny, dia hofafana izy ireo.
Tsy mila fetran'ny habe? Eny, tsy misy, ny fitaovana Smash mety ho tadiavinao. Tsy hangataka anao hisoratra anarana hampiasa azy io, ary ny anao Ho hita mandritra ny 14 andro ny fisie. Raha tianao ny hijanonany ela kokoa dia azonao atao ny misafidy ireo drafitra karama, izay hanomezan'izy ireo statistika anao amin'ny fisintomana ihany koa.
Raha mila ianao mandefa rakitra izay milanja manodidina ny 50 GB, ity angamba no vahaolana ho anao, satria maimaim-poana. Hijanona ao anaty rahona mandritra ny 7 andro izy ireo ary hanjavona avy eo. Ho fanampin'izay, manolotra anao tsy misy fisoratana anarana izy ireo hahafantaranao hoe impiry no nisintona ilay fisie na rehefa ho tapitra.
Ankehitriny, ny olana amin'ity fitaovana ity dia ny tsy fisian'ny encryption, izany hoe tsy ho azo antoka ny rakitrao raha tsy mandoa ny drafitra fandoavam-bola ianao.
Araka ny hitanao dia misy safidy maro azo isafidianana, koa raha mila mandefa rakitra be ianao dia aza manahy fa maro ny fomba anaovana azy mba hahatratrarany ny mpandray na ny mpandray azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Mandefa rakitra be dia be: inona no fitaovana maimaim-poana?